Posted by ကို Tranquillus | စက်တင်ဘာ 22, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
သင်ပျော်ရွှင်နေစဉ်အတွင်းနက်ရှိုင်းစွာခံစားရသောပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ပြခြင်းသည်ထင်ရှားသောအရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုရောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းနည်းခြင်းကဲ့သို့သောအပျက်သဘောခံစားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးနေသည့်အချိန်တွင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာပါ။
ထိုသို့သောဝမ်းမြောက်သောစိတ်အဖြစ်အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုမှကြွလာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြုလုပ်ဝေမျှချင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကအလိုအလျောက်မျက်စိနှင့်မျက်နှာမှတစ်ဆင့်ပုံပေါ်ပါတယ်။ သူကပြောပါတယ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထုံးစံ၌ဟောပြောရမည်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာကျနော်တို့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှင့်အတူပြုမူရပေမည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သူစိမ်းဖို့ရယ်စရာအမူအရာအော်ဟစ်သို့မဟုတ်အောင် Start မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု, task ကိုပိုပြီးခက်ခဲသည်။ တဦးတည်းလက်တွင် express ကိုအခမဲ့သူ့ဟာသူဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ဦးကျန်းမာပေးပါသည်။ သို့သော်အခြားဘက်မှာကြောင့်မကြာခဏတိတ်ဆိတ်ကြောင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုများကကျူးကျော်အခါကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကြောင်းသိရသည်။
အမျက်ဒေါသနှင့်အတူစကားပြောသည့်အခါအမှန်စင်စစ်, ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာနောင်တရစေခြင်းငှါအမှုအရာလို့ပြောထံသို့လာကြ၏။ ကျနော်တို့ကိုကွောကျရှံ့ခံစားရတဲ့အခါနာကျင်သို့မဟုတ်သည့်အခါအလားတူပဲကျနော်တို့မိုလွန်တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်လေ့ရှိပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ခံစားချက်များကိုဖိနှိမ့် ထား၍ မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းထားသင့်သလော မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်နောက်ထပ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်သင်ခံစားရသောအရာကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့ကြိုးစားအားဖြင့်အသိဉာဏ်ပြုမူရန်ရှိသည်။ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်များကဘာလဲ။
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိရင်ဘာမှပြောနေမတိုင်မီလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာကျနော်တို့တကယ်မိမိကိုယ်ကိုအတွင်းခံစားရဘယ်အရာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခြေလှမ်းပြန်ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာခြေလှမ်းအလွန်အရေးပါသည်။ ဒါဟာအလျင်တုံ့ပြန်များနှင့်အမှားများကိုလုပ်သငျသညျကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် tenable ရည်မှန်းချက်များဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ?
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့၏မန်နေဂျာသင်သည်သင်၏အလုပ်၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. ကဲ့ရဲ့စေသည်။ ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခုနှစ်, သငျသညျအမှုအရာပိုဆိုးစေလိမ့်မယ်။ အမှန်စင်စစ်သင်သည်ထိုးစစ်နှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖွင့်သို့မဟုတ်တစ်ဦးမသင့်လျော်အမူအရာရှိနိုငျတယျ။
တစ်ဦးခြေလှမ်းကိုပြန်ယူပြီးအားဖြင့်ငါတို့သည်ပိုကောင်းအခြေအနေကနားလည်ပြီးစိတ်ခံစားမှုဖော်ထုတ်ရန်ထံသို့လာကြ၏။ ဒါဟာအစလိုအပ်ပါကထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဤနည်းဗျူဟာချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပုံကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်ခံစားရသောအရာကိုဝေမျှလိုသည်ဖြစ်စေမရွေးချယ်သည်။ သတိ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပါ ငါတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမယ်။
တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လုပ်ရပ်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှုမျှဝေခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ရန်ချင်သောရည်မှန်းချက်နှင့် ပတ်သက်. သတိပညာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြအဆိုပါလမ်းသည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အမူအကျင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘာသာစကားရှေးခယျြနှငျ့သငျပွောဆိုလတံ့သောအရာကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သောသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအစည်းမျဉ်းတစ်ခုရည်မှန်းချက်ထုံးစံ၌ပြဿနာကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမြဲတမ်းအချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်။
ထို့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ယူဆချက်များသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေဖို့၊ သူတို့ဟာအဖြစ်မှန်တွေကိုမှတ်မိရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်မနက် ၈ နာရီတွင်သင်၏ကောလိပ်နှင့်ရက်ချိန်းယူရမည်။ သူနောက်ကျပြီ ၎င်းသည်ရောက်လာသောအခါ“ သင်သည်နောက်ကျသောအချိန်သို့ရောက်နေသလော” စသည့်အရာများကိုအပြစ်မတင်သင့်ပါ။ "
ပို၍ ကောင်းသည်မှာပြောနိုင်သည် -“ မနက် ၈ နာရီမှာကျွန်မတို့ချိန်းဆိုချက်လုပ်ခဲ့တယ်။ နံနက် ၈:၃၀ နာရီ၊ သင့်ကိုနာရီဝက်ခန့်စောင့်နေတယ်” ၎င်းကိုမိမိကိုယ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်းဟုခေါ်သည်။
ဆက်ဆက်ကြောင့်တရားစီရင်ပိုင်အောင်တားမြစ်သည်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ခံစားရသောအရာကိုဖုံးကွယ်သင့်တယ်မဆိုလိုပါ။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကခေါ်ဆိုသူ၏သိစေရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်သူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်ရပ်တည်ချက်၏အရေးပါမှုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အမူအရာသို့မဟုတ်အသံသြဇါမှတဆင့်စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြနိုင်သောထို့နောက်ငါသိ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားမကြာခဏစကားများထက်နားလည်ရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဲဒါကိုကသူ့သဘောထားတွေသို့မဟုတ်သူ၏လေသံမှတဆင့်မပြပါဘူးဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာသသို့မဟုတ်အလေးအနက်ထားပြောတတ်ခြင်းရှိမရှိသိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
သူကပြောပါတယ်, ကစတင်မတိုင်မီ, တစျဦးကပထမဆုံးမြင်သာထင်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အစပျိုးခြင်း၎င်း၏အရိပ်လက္ခဏာအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဒါကကျနော်တို့ပိုကောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကစိတ်ဖိစီးမှု generate တံ့သောစိတ် ရှိ. မကောင်းသောအကြံအစည်မောင်းထုတ်ရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကျနော်တို့လက်တွေ့ကျန်ရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းစိတ်ခံစားမှု ဖော်ပြ. , ဒီအဖြေတစ်ခုအဆိုပြုဖို့လည်းသိကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာကအပြစ်တင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါစံပြတစ်ဦးအပြုသဘောမှတ်ချက်အပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသိရှိလာသောအခါဒါကြောင့်လိုချင်သောအရေးယူထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့က၎င်း၏သဘောပေါက်ဘို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အခြေအနေများ add ရပါမည်။
အားလုံးအခြေအနေ, သင်မှန်ကန်သောအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးပါရှိရပါမည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငေါ့သဘောထားမှတ်ချက်စေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သာမကောင်းတဲ့လေထုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရည်မှန်းချက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ပဋိပက္ခဖန်တီးဖို့, ဒါပေမယ့်အမှုအရာပြောင်းပေးဖို့ရှင်းပြဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
သိသာထင်ရှားတဲ့အပြုသဘောပြောဆိုရန်, ငါတို့အရပ်ကပြန်ခြေလှမ်းရန်လိုအပ်ကြောင်းရင်ဆိုင်ရဖို့ကိုပွငျဆငျရမည်ဖြစ်သည်။ တဦးတည်းဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြမှသင်ယူဖို့အချိန်ပေးရမည်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့သည်လည်းယင်း၏တင်ပါတယ်၏စိတ်ခံစားမှုကြိုဆိုပါတယ်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအသိဉာဏ်ထုံးစံ၌အပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးအလုပ်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ပေးထားသောအခြေအနေနှင့်ယင်း၏စိတ်ခံစားမှုအမူအရာအားမိမိတုံ့ပြန်မှုကိုသိရန်ရရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တိုတိုမှာတော့စိတ်ခံစားမှုအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းများဖော်ပြကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအပေါ်အမှန်တကယ်အလုပ်လိုအပ်သည်ခက်ခဲတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုအမူအရာကိုထိန်းချုပ်ဖို့သင်ယူပြန်ခြေလှမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသူ၏စကားကိုရှေးခယျြနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူစကားမပွောနိုငျဖြစ်ရမည်။
စိတ်ဖိစီးမှုပြန်ခြေလှမ်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်းစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြ။ နိုဝင်ဘာလ 21st, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် setting ကိုအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရှောင်ရှား / ပိုကောင်းစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲရန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်ကို5သော့ချက်